Bisikileta bisikileta bisikileta, bisikileta an-tendrombohitra herinaratra, scooter elektrika - Shengtai
Tianjin Shengtai International Trade Co., Ltd. dia mpanondrana bisikileta herinaratra 10 taona, ao anatin'izany ny fampandrosoana sy ny famokarana, naorina tany Tianjin, Sina. Izahay izao dia mitazona ny faritra zotra TRANO MAIMAIM-POANA Tianjin PILOT eo ambanin'ny soritr'asa politika manokana sy ny tombony manokana ara-jeografika. Ho fanampin'izany, ny tsipika famokarana sy ny fitehirizana anay dia eo akaikin'ny Seranan'i Tianjin sy ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Tianjin-Binhai, izay tena mety amin'ny fitaterana. Ho an'ny vokatray: mitazona an'ity fahamarinana ity izahay hatoky tena fa afaka manamboatra vokatra azo antoka sy sarobidy miaraka amin'ny traikefa amin'ny orinasa 10 taona. Ho an'ny teknolojia misy anay: manana ekipa R&D tsy miankina izahay izay manome OEM sy ODM. Ary ho an'ny serivisinay: nataonay ny antsipiriany rehetra hanome fahafaham-po ny filan'ny mpanjifanay.
500W 350W vy ebike 48V / 60V bateria-asidra mitarika ...
New sport man 500W 750W motera MTB herinaratra bateria ...
LCD mampiseho vidiny ambany 36V 250W fanatanjahan-tena 26i ...
Tamin'ny 2021, nitombo intelo farafahakeliny ny vidin'ny bisikileta elektrika. Izany no bcz amin'ny vidin'ny vy efa lehibe ary koa fitaovana hafa. Tsy marin-toerana ny tsena ary koa ny toedran-dranomasina. Ny Tianjin Shengtai International Trade Co., Ltd dia mijery hatrany ny fironana amin'ny tsena, mifehy tsara ny kalitaon'ny vokatra ary tsy manelingelina ny filaharan'ny tsena iraisampirenena mahazatra. Mifehy ny vola lany amin'ny fiantohana ny kalitao. Ka tsy nisy fiatraikany lehibe tamintsika ny tsy fandriam-pahalemana amin'ity taona ity.
FITIAVANA BICYCLE ROAD
Ny fifaninanana amin'ny bisikileta an-dalambe dia ny taranja fanatanjahan-tena amin'ny bisikileta amin'ny bisikilety, tanterahina amin'ny arabe vita. Ny hazakazaka amoron-dalana no endrika malaza indrindra amin'ny hazakazaka bisikileta, amin'ny isan'ny mpifaninana, hetsika ary mpijery. Ny endrika roa mpifaninana mahazatra indrindra dia ny hetsika fanombohana faobe, izay manomboka miaraka ny mpitaingina (na dia misy sembana aza indraindray) sy ny hazakazaka hametrahana teboka farany; ary fitsapana ara-potoana, izay misy mpitaingina na ekipa tsirairay mihazakazaka mihazakazaka irery amin'ny famantaranandro. Ny hazakazaka an-tsehatra na ny "fitsangantsanganana" dia maharitra andro maromaro, ary misy dingana fanombohana na fizahan-toetra marobe misesy mifanesy.
Fampandrenesana ny taona vaovao
Raha ny zava-nisy tamin'ny taona lasa dia hiakatra ny vidin'ny akora aorian'ny taona vaovao sinoa. Saingy tamin'ity taona ity, raha ampitahaina tamin'ny taona lasa, ny fiakaran'ny vidin'ny akora dia nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana desambra. Ary ny frame dia tsy mora vidiana, sahala amin'ity bisikileta an-tendrombohitra ity amin'ity taona ity, ho lava sy lava kokoa ny fotoana anaterana azy. Noho izany dia soso-kevitra fa ny mpanjifa manana ny filany mividy dia tokony hametraka baiko faran'izay haingana. Miezaha amin'ny fandefasana aloha sy ny vidiny ambany.